PROJECT PROMETEY famokarana vokatra solika avy amin ny fako sy mineraly
"Klimov Design Bureau" - fametrahana "PROMETEY" amin'ny famokarana angovo avy amin'ny karazan-tsakafo sy ny fako isan-karazany
Manolotra zavamaniry fanodinana fako amin'ny taranaka fahatelo izahay: tsy misy setroka, tsy misy fandroahana.
Vokatra farany amin'ny fivoahana: rano madio sy tsy misy entona karbonika manimba.
Toe-javatra ilaina amin'ny fitomboan'ny zavamaniry. Tsarovy ny tontolo iainanao - FAHORIANA.
Famoahana ny fampisehoana ny fitaovana fitsaboana fako
Ho an'ny mpanolotsaina voalohany
Atero solika, solika ary entona handoapana ny fiaranao ao amin'ny orinasa modem PROMETHEUS an'ny Biraon'ny Design Klima. Avy amin'ny fantsona matanjaka: fako an-tanàn-dehibe, arina, tavoahangy, rotsak'orana. Avy amin'ny fantson-drano maloto: solika, solika solika, loto, solitany. Ny zavamaniry bitika dia mamolavola taon-jato vaovao: mitady mpivarotra any amin'ny firenena manerana izao tontolo izao. Ataovy madio sy mahomby ny planetanao
Fantatsika fa ny zavamiafin'ny pyrolysis, ny ranon-javatra isan-karazany, ny fiompiana fary, ny vaksiny, ny tsiranoka mipetaka amin'ny solika, ny fandefasana entana, ny vaksiny, desalinators of sea water.
PROJECT "PROMETEY" - famokarana vokatra solika avy amin'ny fako sy mineraly
Fametrahana ireo orinasa maromaro ho an'ny fanodinana ny fako amin'ny angovo sy ny fanangonam-bidy namboarin'ny biraon'ny design of Klimov
Fomba teknolojika manerantany ho an'ny fanodinana ny fako ao anaty solika
Fikarakarana karazam-bary isan-karazany amin'ny zavamaniry universalin'i Klimov
Toy izao ny fomba fijerin'ny fakana an-tanan-dehibe mialoha ny famerenana ho "volamena mainty", avy eo amin'ny solika.
Izany no habetsahan'ny fako an-tanan-dehibe ilainao hahazo menaka 1 litera mena. Olon-java-manify, izay misy 80% ny varo-drivotra.
Ankehitriny, na aiza na aiza alehany, dia aleony ny mandady fako toy izany ao anaty fanariam-pako, fa tsy mamerina. Ary raha ny tena izy, 10 kilao ny fako isan'andro - ary iray amin'ny trano iray dia feno herinaratra sy hafanana tanteraka.
Hatramin'izao, 1 tonin'ny fako dia mety hitondra 500 dolara amin'ny vola miditra amin'ny vola. Alaivo sary an-tsaina hoe inona no mahatonga ny tanana kely misy mponina 200 000, mandevina faktiora 1000 taonina isan'andro ao amin'ny toeram-ponenany. Ny mponina ao amin'io tanana io dia mamoaka $ 500.000 isan'andro.
"POTRAMA" dia mamaritra ny fanapahan-kevitry ny GLOBAL mikasika ny fampandehanana ny fifamoivoizana
Ny tombony amin'ny trano "POTRAM" dia ny "fahaterahany". Ankoatra ny fako simika, ny angadinomby, ny tavy, ny solika, ny alim-bary, ny ampiasaina ny motera sy ny indostria, ny fanasan-dalamby, ny hazo, ny fako, ny lignin, ny cellulose, ny fambolena fambolena, ny solika, ny solika mavesatra, menaka, asphalt, bitumen, kodiarana nolavahana, fanodinana papier, fantsom-pito.
Ny karazam-pitrandrahana rehetra "POTRAM" ho an'ny fanodinana fako sy fandraisana vokatra azo tsena.
Complexes "POTRAM" ho an'ny fanodinana fako.
Fambolena "PROMETHEUS-FARMER" ho an'ny fanodinana ny fako amin'ny fambolena. >>>VAKIO<<<
Complexes "POTRAM" ho an'ny fanodinana fako mafy. >>>VAKIO<<<
Complexes "POTRAM" ho an'ny fanondranana arintany mavo tsy misy kalozia. >>>VAKIO<<<
Complexes "POTRAM" ho an'ny fanodinana ny tavy. >>>VAKIO<<<
Fambolena "PROMETEY" ho an'ny fanodinana ny alim-bary (lignin) amin'ny alalan'ny solika sy solika (code 1200/03). >>>VAKIO<<<
Complexes "POTRAM" ho an'ny fanodinana kodiarana sy fingotra. >>>VAKIO<<<
Complexes "POTRAM" ho an'ny fanodinana ny loto. >>>VAKIO<<<
Complexes "POTRAM" ho an'ny fandraisana ireo vokatra azo tsena.
Complexes "POTRAM" ho fandraisana solika sy fanangonam-bidy. >>>VAKIO<<<
Complexes "POTRAM" ho an'ny famokarana vilia baolina. >>>VAKIO<<<
Plant "PROMETHEUS" ho an'ny famokarana entona (andiany 1400) >>>VAKIO<<<
Plant "Prometheus" hamoronana herinaratra (andiany 1500)>>>VAKIO<<<
Fahaizana manokana "POTRAM".
Complexes "POTRAM" ho an'ny fanodinana solika ampiasaina, solika solika, vokatra solika mavesatra ao anaty solika. >>>VAKIO<<<
Ny orinasan'ny orinasa indostrialy Klimov Design Bureau "PROMETHEID-OIL" (andiany 3000). >>>VAKIO<<<
PYROLYSIS INSTALLATION SY FITANTANANA TETI-TOKONY
Fanorenana ny fako pyrolysis FERMER
Fambolena fanodinana fako marefo PROMETEY-FARMER
Sary famantarana ny zavamaniry PROMETEY-FERMER ary avereno jerena pyrolysis complexes
FIFANEKENA FIFANEKENA FIFANEKENA MOMBA NY TSIAMBARATELO AO AMIN'NY TELEVIZIONA
Fandefasana entona mandona ECO-FARMER